Ndị na -ebubata ihe na -emepụta ihe na ụlọ nrụpụta - China na -ekewa ndị na -emepụta Bolt
A na-eji FB-47 Split Set Bolt dị ka isi ihe na-eme ka esemokwu sie ike maka ọrụ dị n'okpuru ala ma ọ bụ karịa na ogbunigwe, ọwara ma ọ bụ mkpọda ma ọ bụ ebe ọ bụla nkwado ala kwesịrị ntụkwasị obi, ọkachasị na mmepe jumbo arụpụtara na imepụta ya. Emebere FB-47 Split Set Bolt anyị site na eriri igwe siri ike nke nwere nchacha pụrụ iche nke nwere Si & P na ngwa kemịkalụ, ọ ga-eme ka mgbachi ahụ rụọ ọrụ zuru oke nke ịkwado okwute, ma nyere aka inwe ezigbo mma n'ịkwalite. . Ka ọ dị ugbu a, site na igwe ịgbado ọkụ akpaaka nke PLC nwere, mkpọchi ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe etinyere ya na okwute.
A na-eji FB-39 Split Set Bolt eme ihe maka ịchekwa mesh strata site na ịwụnye n'ime mgbachi mgbagha 47mm dị ugbu a yana obere efere. A na -ejikwa ogologo ogologo dị ka nkwado ala mbụ mgbe a na -egwu olulu obere dayameta. FB-39 Split Set Bolt anyị mere site na eriri siri ike nke nwere ncha pụrụ iche nke nwere Si & P dị ala na ngwa kemịkalụ, ọ ga-eme mkpọchi ahụ na arụmọrụ zuru oke nke ịkwado okwute, ma nyere aka inwe ezigbo mma n'ịkwalite. . Ka ọ dị ugbu a, site na igwe ịgbado ọkụ akpaaka nke PLC nwere, mkpọchi ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe etinyere ya na okwute.
A na-ejikarị FB-33 Split Set Bolt iji kwado nkwado ala mgbe achọrọ ọrụ nsị. FB-33 Split Set Bolt anyị mere ya site na eriri igwe siri ike nke nwere nchacha pụrụ iche nke nwere Si & P na ngwa kemịkalụ, ọ ga-eme mkpọchi na arụmọrụ zuru oke nke ịkwado okwute, ma nyere aka inwe ezigbo mma n'ịkwalite. . Ka ọ dị ugbu a, site na igwe ịgbado ọkụ akpaaka nke PLC nwere, mkpọchi ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe etinyere ya na okwute.
UTILITY SPLIT SET HANGER BOLT (Esemokwu nkwụsi ike)
Gbasaa oghere mkpọchi ihe eji eme ihe dị na ụdị niile yana ruo 900mm. Ha abụghị maka nkwado ala, mana ha na -enye otu uru nrụnye dị ka mgbachi mgbachi. Ha na -abata na otu dayameta tube, na -ejikwa otu mbadamba ihe. A na -eji ha akwado eriri, ọwa mmiri, ọkpọkọ na Mesh m. Enwere ike kpọgide ihe ndị dị fechaa dị ka ọkpọ ọkpọ ikuku site na loop na efere ebu.
FB-42 SPLIT SET BOLT (Onye na-ese okwu)
A na-eji FB-42 Split Set Bolt dị ka ihe nkwado nkwado ọzọ nke FB-47 Split Set Bolt maka ọrụ ala ma ọ bụ karịa na ogbunigwe, ọwara ma ọ bụ mkpọda ma ọ bụ ebe ọ bụla nkwado ala kwesịrị ntụkwasị obi, ọkachasị na mmepe jumbo arụpụtara na imepụta ya. Emebere FB-42 Split Set Bolt anyị site na eriri igwe siri ike nke nwere ọkwa Si & P dị ala na ngwa kemịkalụ iji rụọ ọrụ zuru oke na nkwado ala, ma nyere aka inwe ezigbo mma n'ịkwalite.